Location: Mbido » Ịdee » Akụkọ Ọchịchị » Otu bọọdụ ọhụrụ ahọpụtara maka ndị mmekọ UNWTO
World Tourism Organisation, UNWTO bụ otu gọọmentị etiti, UNWTO nwere mba 159, ndị otu 6, ndị na-ekiri 2 na ndị otu 500 Mgbakwunye.
Ndị otu jikọrọ aka bụ ndị nnọchi anya otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ nkeonwe. Ha anaghị eme ntuli aka na ntuli aka gọọmentị, dị ka ntuli aka nke odeakwụkwọ ukwu, mana na-arụ ọrụ dị mkpa iji nye ndị ọrụ nzuzo olu n'ime ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke United Nations.
N'akụkụ ihe ngosi ahia ahia njem FITUR nke mechiri na Madrid, Spain, ndị òtù 23 nke Òtù Na-ahụ Maka Njikọ họpụtara Hotel Business Association Madrid (AEHM) dị ka Onye isi oche, bụ Ms. Mar de Miguel, onye isi oche onye isi oche; Chamber of Tourism of Argentina dị ka 1st Vice-Chair nọchitere anya Mr. Gustavo Hani, President; na Chameleon Strategies dị ka 2nd Vice-Chair nọchitere anya Mr. Jens Thraenhart, CEO.
Jens Thraenhart kwuru
Mazị Jens Thraenhart mere akụkọ akụkọ zuru ụwa ọnụ ugbu a na-aghọ onye isi oche mbụ nke Barbados Tourism Board mgbe e kwuchara Republic of Barbados.
N'ikpeazụ site na ntuli aka ahụ, onye isi oche ọhụrụ ahụ, Ms. Mar de Miguel, gosipụtara obi ụtọ ya maka ntụkwasị obi nke ndị Board ndị ọzọ tụkwasịrị ha ma kwupụta na ọ dị njikere ịrụ ọrụ iji kpọghee ikike nke ndị òtù UNWTO Mgbakwunye dịka ngwá ọrụ iji kwalite mma njem nlegharị anya, welie imekọ ihe ọnụ ọha na eze ma mee ngwa ngwa mgbake nke ngalaba ahụ.
Zurab Pololikashvili, odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO, kwuru, sị: "UNWTO dị njikere ịrụ ọrụ aka na aka na aka na Board ọhụrụ nke Ndị Mmekọ, na m ga-achọ n'onwe m ikele onye isi oche na ndị isi oche a họpụtara maka ịrụsi ọrụ ike. A na m arịọ ha ihe kacha mma n'ọrụ ọhụrụ ha."
The Board nke Mgbakwunye Members bụ ndị nnọchiteanya nke ihe karịrị Ndị mmekọ 500 nke UNWTO. N'ime ọrụ ya, ọ bụ ịnye ndụmọdụ na ndụmọdụ nye odeakwụkwọ ukwu maka nkwadebe nke Mmemme Ọrụ maka Ndị Mmekọ yana ajụjụ ọ bụla gbasara ndị otu Mgbakwunye.
Na-eso nkwado na 24th UNWTO General Assembly nke usoro iwu ọhụrụ nke ndị mmekọ, nke mere ka ikike nke Board dịkwuo omimi, a ga-akpọ ya ka ọ rụọ ọrụ iji wusie ike ọrụ nke ndị mmekọ dị n'ime nzukọ ahụ na ime ka mmekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na ndị òtù UNWTO.
Argentina Barbados Business Hotel Madrid Tourism United Nations
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Commonwealth ahọpụtala onye isi ọrịre nke...